The Irrawaddy's Blog: ဒေါ်အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့ ဂျာမန်ဝန်ြ​ကီး သတင်းစာရှင်း​လင်းပွဲ
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၄ ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့က ရန်ကုန်မြို့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်း​စုကြည်နဲ့ ဂျာမန်ဝန်ြ​ကီး တွေ့ဆုံအပြီး ပြုလုပ်တဲ့ သတင်းစာရှင်း​လင်းပွဲ အသံ​ဖိုင် ဖြ​စ်ပါတယ်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က တွေ့ဆုံမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စတင် ပြောဆိုပါတယ်။
အဲဒီနောက် ဂျာမန်ဝန်ြ​ကီးကလည်း ဆွေးနွေးပွဲအကြောင်း အကျဉ်းချုံး ပြောဆိုပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ပါပဲ။ တယောက်ကို တမိနစ်လောက် ပြောကြပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေရဲ့ အမေးတွေကို သူတို့ ၂ ယောက် ဖြေဆိုကြပါတယ်။
အသံဖိုင်ကို ဒေါင်းလုတ် လုပ်နိုင်ပါပြီ။
ဒီမှာ နားထောင်ဖို့ အခက်အခဲ ရှိရင် မူရင်း အသံဖိုင်စာမျက်နှာ http://soundcloud.com/sithublogger/daw-suu-and-german-federal-1 မှာ နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
ဂျာမန်ဝန်ကြီးက စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဝန်ကြီး Mr. Dirk Niebel ဖြစ်ပါတယ်။
Posted in: Audio , သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ , အသံဖိုင်
ပြည်ပ ခေါင်းဆောင်တွေက၊ Myanmar လို့ခေါ်နေကြပြီး၊ ဒေါ်စုက Burma လို့ ပဲ ခေါ်နေသေးတာ နည်းနည်း ထူးခြားနေသေးသလိုပဲ။ Myanmar လို့ဒေါ်စုကို ခေါ်စေချင်တဲ့ သဘောမျိုး ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ ပြည်သူလူထုက ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး တက်လာတဲ့ အစိုးရက ပြောင်းထားတဲ့ နာမည်မဟုတ်လို့ ၊ မခေါ်ချင်တာတော့ သိပါတယ်။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အရေးပါအရာရောက်ဆုံး အစိုးရအဖွဲ့ အတွက်၊ အမတ်လောင်းအဖြစ် အရွေးခံတော့မယ့် ဒေါ်စုကို၊ အသေးအဖွဲ ကိစ္စလေးတခုကြောင့် အစိုးရက ငြိုငြင်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိလို့ ပါ။
Peter Shwe said... :
မှန်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်၇ဲ. နာမည်ကို ရွေးချယ်တဲ.နေ၇ာမှာ၊ လူထု၏ သဘောတူညီချက်မပါပဲ၊ ရွေးချယ်ထာတဲ.နာမယ်ကိုပဲခေါ်မလား အများနာလည်နေတဲ. တိုင်ပြည်နာမယ်ကို ခေါ်ပါမလား ဆိုတာ ဒီနေ၇ာမှာ conflict ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ. လူထုတ၇ပ်လုံး အသေအခြာ စဉ်စားကြည်.မယ်ဆို၇င်၊ နိုင်ငံ၇ဲ. နာမယ်ကလဲ မြန်မာ၊ လူမျိုးကလည်းမြန်မာ လို. အင်္ဂံလိပ်လို form တွေဖြည်.နေကြ၇တဲ.့ ပြည်ပဆိုင်၇ာ မြန်မာတွေကြတော. လူ၇ီစ၇ာကြီးပါ။ Nationality မေးတော. Myanmar လို.ဖြည်.ကြ၇သလို၊ Country of origin ကျတော.လည်း Myanmar. Nationality မှာ ဘာကြောင်. Myanmese လို. မပြောကြတာလဲ ဆိုတာတော. မေးစ၇ာ မဖြစ်ပေဘူးလား။ Burma လို.နာမည်တွင်ခဲ.တုံးက၊ Burmese လို. မဖြည်.ခဲ.ကြ၇ဘူးလား။ ဖြေ.ခဲ.ကြ၇တာပဲ မဟုတ်လား။ ကမ္ဘာက သိတဲ.နိုင်ငံသည် Burma ပါ။ မြန်မာလူမျုးတွေကိုလည်း Burmese လို.ပဲ လက်ခံထားကြတယ်။ ဒီလိုပါပဲ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ.ကလည်း Media တွေကိုပြောတဲ.နေ၇ာမှာ ကမ္ဘာက သိတဲ language ကိုပဲသုံးပြီး ပြောနေတာ၇ယ်၊ ဖခင်ကြီး၇ဲ. သတ်မှတ်ထားခဲ.တဲ. တိုင်းပြည်၇ဲ.အသိအမှတ်ပြု နိုင်ငံတခုအဖြစ်ထားရှိပြီး ခေါ်ဆိုနေတာ ဖြစ်နိုင်ကောင်းတယ်လို. ကြားကနေ တင်ပြပါတယ်။
အမှန်တော. လူထု၇ဲ. သဘောလေးတော. ယူကြ၇င်ကောင်းတာပေါ. တိုင်းပြည်ကို နာမယ်ပြောင်းတဲ.ကိစ္စဟာabig job ပါ။ ပီကင်းက နာမယ်ပျက်စပြုလာတော. ဘေဂျင်ပြောင်းသလို၊ ဘုံဘေက မိုဘိုင်းလို.ပြောင်းသလို၊ ဗမာပြည်ကလည်း မြန်မာပြည်လို. ပြောင်းတာ သိပ်မဆန်းသလိုဖြစ်ပေမဲ. Myanmar ကို မိုင်၇င် မာ လို. တချို. နိုင်ငံခြားသားတွေက မပီလို. ခေါ်နေသံတော.ကြာ:နေလေ၇ဲ.။ နဲနဲတော. ရှက်မိတယ်။ Burma ကို ဘယ်သူမှ ဘူးမားလို.မခေါ်ခဲ.ကြပါ။ အိန္ဒယ လူမျိုးများကသာ စကားမပီလို. ဘာ၇မာ လို.ခေါ်သံကြားဖူးတယ်။ ဗမာပြည်လို. ပြန်ပြောင်းနိုင်၇င် Myanmar ကနေ Burma သို.ပြောင်းမဲ.အချိန်ကိုစောင်.၇င်း အမှန်တ၇ားကလေးတခု ဗဟုသုတ အဖြစ် တိုက်တိုက် ဆိုင်ဆိုင်မို.တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Daw su is from england that's why she call Burma instead of Myanmar. When she become MP, she may change our country name to Burgland :-). I feel so sorry about our people that thae have blind faith on Daw Su. Actually she did nothing, But she spend several years under house arrest as investment for success in her career. Now she is claiming her success and she get blind faith from Myanmar people , especially poorly educated people. I am really sick of her. I knew that there arealot of people who don't like her. But if we oppose her people will assume us as bad guys and supporters of military regime. So we have no choice, only to keep silence. IT IS HARD FOR ME TO ACCEPT THIS SITUATION AS POSITIVE.
ကျေးဇူးပါပဲ ကိုပီတာ။ ဒီလိုနွေးထွေးတဲ့
တုန့် ပြန်ဆွေးနွေးချက်လေးကို ဖတ်ရတာ၊ ရင်ထဲမှာ ကြည်နူးမိပါတယ်။ အရင်အစိုးရလက်ထက်တုန်းက ပြည်ပခေါင်းဆောင်တချို့Burma လို့ ပဲ ဆက်ခေါ်နေ
လို့ ၊ ကတောက်ကဆတွေ ဖြစ်ကြသေးတာ ဖတ်လိုက် ကြားလိုက်ရသေးတယ်။ မြန်မာပြည်ဝင်ခွင့်တောင်းတဲ့
အချိန်မှာ၊ ခင်ဗျားတို့Myanmar လို့ ပြောင်းမခေါ်ရင်၊ ပြည်ဝင်ခွင့်မပေးဘူးလို့ကန့် သတ်ထားလို့ များ မခေါ်မဖြစ် ခေါ်နေကြရတာလားတော့ မသိဘူးနော်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်ကြည့်ရတာ၊ သူတို့ တွေလည်း အခက်အခဲမရှိ သက်တောင့်သက်သာပဲ ခေါ်နေကြတယ်။ ဒီဝက်ဘ်ဆိုဒ်မှာပဲ ဒီအခေါ်အဝေါ်
နဲ့ ပါက်သက်ပြီး (မြန်မာလား၊ ဘားမားလား ဆိုတဲ့ ဆောင်းပါးမှာလား မမှတ်မိတော့ဘူး) ကျနော် Research လုပ်ပြီး တင်ထားပေးဖူးတာ ရှိတယ်။ မြန်မာဘုရင်လက်ထက်တုန်းက နန်းတွင်းမှာ နေထိုင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့၊ ဆာ အာသာဖယ်ယာရေး မြန်မာပြည်အကြောင်းစာအုပ်ထဲမှာ၊ မြန်မာလို့ ခေါ်မှ အားလုံးကို ခြုံပြီးခေါ်ရာကျတယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ ဒါပေမယ့် သူကိုယ်တိုင်ပဲ ပြန်ရှင်းထားတာက၊ မြန်မာလို့ရေးပေမယ့် ဗမာလို့အသံထွက်ရတယ်တဲ့။ ဆိုတော့ Myanmar လို့ ရေးထားတာကို Bamar/Burma လို့ထွက်ကြပါလို့ပြောရမလား၊ အသံထွက်အတိုင်း Bamar/Burma လို့ ပဲရေးပြီး၊ ရေးတဲ့ အတိုင်းပဲ ထွက်ခိုင်းရမလားဆိုတာပဲ စဉ်းစားစရာ။ ဒါကလည်း ဒီစာအုပ်ရဲ့ အာဘော်ကို အတည်ပြုမှ ရမှာပါ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ လည်း ဒီအစိုးရ
နဲ့ သင့်တင့်အောင်၊ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိအောင် အများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပေမယ့်၊ ဒီတခုကိုတော့ တင်းခံထားတုန်းပဲဖြစ်နေတာကို စဉ်းစားပြီး၊ ကျနော်ပထမဆုံး ကော့မန့်ရေးတင်ခဲ့တာပါ။ စာဖတ်သူတွေရဲ့ အမြင်လေးတွေ ထပ်တက်လာတာကို၊ မြင်ချင်ပါသေးတယ်။ အမြင်လေးတွေ ဖလှယ်ကြရင်းနဲ့ ၊ ကျနော်တို့ ရဲ့ ရင်းနှီးမှုလေးတွေ တည်ဆောက်ကြတာ
Yes I can understand your concerns. I also accept that it is hard for you to accept. she was from England but born in Burma. I can assure that she will not manipulate our people. She hadavery strong feeling. Her father was assassinated if you remember. She will not let down our citizens. She scarified years living in house arrest. Why is that? Who is going to be away from the family and sacrified for nothing? I can understand the feelings people had as you mentioned in your comment. I know some people like her and some people don't. It is depending upon how people's concept. Everbody has their rights to say anything they want. I am not from Daw Su Kyi's side as well as the other side ( military regime ). However I am trying to balance up both sides and their course actions for the public. Our people were getting poor an poor. The inflation has gone up likeafly sky. who takes the responsibility to recover from this? I see nobody. All they were doing is making their pockets full. Selling the country to China. Daw Su has no chance to do yet. She brings business and foreign investments. You would appreciate the top people from individual countries are still arriving our country to say hello to Daw Su. And yet they are contributing their investments in our country for the development. China is sucking our blood. Not giving out gold or the country's developments as far as I am aware of. This is only example. Because Burma was sactioned by the world only china can be approachable by our military. So we were not improving as much as we would. The country is getting poor an poor.
So I am trying to balance up between military government and Daw Su. She isamember of the public. She will think twice to do something which would give hum to our citizens. She will not do anything to hum us. She deserves something and some positiion in the country. That 's all I like to comment.
To Anonymous said... :
To the person who spouted this...
Anonymous says: February 15, 2012 9:41 PM Reply
You are really mistaken about the intelligence of Burmese people and for that matter, the leaders from all over the world. How could you in any sensible mind say that solitary house arrest was an investment for personal success? Maybe why don’t you try shutting out yourself from outside world foraweek, not evenamonth, just to emulate whataperson under house arrest feels? Really, it amazes me every time people like you declaim and attack personally on Daw ASSK just because she is loved and respected by all the Burmese and beyond.
When did she ever claim success for what is going on in Burma right now? Is she really loved by only the poorly educated? Maybe, the government leaders from around the world who have affectionately paidavisit to her are not as educated and intelligent as you are indeed? So are the president and the thugs-turned-politicians in current parliament who have accorded herarightful respect! And if you seriously think the current situation isasuccess for Burma and Daw ASSK, you have really underestimated and naively assumed the whole situation of the sorry state of Burma and its people.
Your whole message smacks of jealousy typical of those junta cronies and low-class soldiers sent to Russia who are wasting the tax-payers’ money but behaving as ingrates and insult to the people of Burma. Of course, you will be sick of her. And of course you knowalot of people who don’t like her. I believe in that assertion. In fact people like you will be sick of her and afraid of her because the new democratic Burma will not let you ravage the country and, enslave and abuse the Burmese people. I believe you must have the blind faith to keep the status quo of the military-controlled Burma in which you can abuse and pillage the country without any consequences and accountability.
You are also right that the situation currently is not positive yet. How can the ordinary Burmese feel positive when the military reserves 25% in the parliament, the commander-in-chief is more powerful than the president himself, the thugs in green uniform with no college degrees take every civilian expertise positions within civil service, the army can defy the order of the president to stop fighting, and so on? The list continues ad infinitum, obviously. So, in light of these, Daw ASSK and the democracy activists are the only people who everyone can wholeheartedly trust and who will always stand in front of the people. This is justabeginning for the people of Burma heralding inanew era. There is obviouslyalong way to go. And understandably, you and your ilk will be very afraid of the change that is blowing in the air. Maybe you just continue reading the news but stop looking at those pictures with crowds.
No wonder it takesagreat deal more than havingabrain to be the beloved leader ofacountry.
ဟုတ်ပါတယ်။ အမြင်ကလေးတွေဖလှယ်ကြတာပေါ. ပထမဆုံး comment ပေးတဲ.နောင်ကြီးေ၇။ ကျနော်ကတော. ဘယ်သူ.ဖက်ကမှ မဟုတ်ပေမဲ.့ ပြည်သူတွေအတွက် ကောင်းမဲ.အ၇ာလေးတွေ ရှာဖွေလေ.လာတင်ပြ၇င်း၊အကောင်းမြင်ဝါဒ ကို တတ်နိုင်သလောက်ကြိုးစားပြီး တင်ပြခဲ.တာပါ။ တယောက်နဲ. တယောက် တခါတလေကျတော.လည်း အယူအဆ တူချင်မှ တူတတ်ကြပါတယ်။ စောစောကပဲ ကျနော် ဆီကို comment ပေးထားတာကို ဒေါ်စုကို သဘောမကျဖြစ်တဲ. တယောက်ကို ကျနော် အင်္ဂံလိပ်လိုပဲ ပြန်ရှင်းပေးထားပါတယ်။ လူတိုင်းမှာ မိမိတို.၇ဲ. ထင်မြင်ချက်ကို ပြောပိုင်ခွင်.ရှိကြပါတယ်။ နောင်ကြီးပြောသလို ဘာကြောင်.တင်းခံနေပြီး Burma လို.ပြောတာလည်းဆိုတာကို နောက်ထပ်ကျနော့် မြင်တာကတော. နိုင်ငံခြားသားတွေက Burma လို.ပြောနေ၇င်တော.၊ မြန်မာလို.ပြောမှာမဟုတ်ပါ။ ကျနော်တို.အတွက်ကတော. ဒါပါပဲ။ ဘာမှတော.မထူလောက်ပါဘူး။ အေ၇းကြီးတာကတော. တ၇ားသော ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်ဖို.ပါပဲ။ ဒါကိုပဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူတို.ကိုပြောနေတာကတော. ရွေးကောက်ပွဲပြီးအောင်စောင်.ကြပါဦး၊ ဆက်ရှင်တွေကို မသိမ်းကြပါနဲ.ဦးလို.မှာထားတာပဲ ဖတ်ကြည်.နိုင်ပါတယ်။ သူ.အကြောင်းနဲ.သူတော.ရှိမှာပေါ.လေ။ တချို.ကတော. ဒေါ်စု လုပ်တာ အလုပ်မဟုတ်ဖူးလို. ဝေဖန်ကြတယ်။ လောကမှာ အမဲရှိမှ၊ အဖြူဆိုတာပေါ်လွင်တာပါ။ ဝေဖန်တဲသူတွေရှိသလို၊ ကျေးဇူးတင်တဲ.သူတွေလည်းရှိနေမှာပါ။ ဂဏန်း နံပါတ် ၁ ကို လေးဖက်လေးတန်ကကြည်.ပြီး တစ်လို.ပြောတဲ.သူရှိသလို၊ ဂငယ်လို.ပြောတဲ.သူလည်းရှိမှာပါ။ ထိုနည်းပဲ "င" လို.ပြောတဲစူရှိသလို၊ "ပဆောက်" လို.ပြောတဲ.သူလည်းတွေ.၇မှာပါ။ အားလုံးက ကိုယ်မြင်၇ာကို ပြောပြီးငြင်းနေကြမယ်ဆို၇င်၊ အဖြေမှန်၇ဖို. ခက်န်ုင်ပါတယ်ဗျာ။
ဟား ဟား ဟား၊ ကိုပီတာကြီးလည်း မြန်မာလိုရှင်းလိုက်၊ အင်္ဂလိပ်လိုရေးလိုက်နဲ့တယောက်တည်း ဒိုင်ခံပြီး အလုပ်ရှုပ်နေပြီ။ ကိုပီတာက အင်္ဂလိပ်လိုရေးပြီး ဟို Anonymous စာချစ်သူတယောက်ရဲ့ ကော့မန့် ကို ပြန်ချေပထားတာ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါတယ်။ သူလည်း သူ့ အမြင်ကို တင်ပြတာကို၊ ကျနော်တို့ က လေးစားရမှာပေါ့။ အဲဒီအထဲမှာ စာလုံးပေါင်းအမှားတွေ
တွေ့ ရပေမယ့်၊ ဒုတိယဘာသာစကားအနေနဲ့ရေးထားတာဖြစ်လို့ ၊ နားလည်ပေးလို့ရပါတယ်။ ကိုပီတာ ရေးချင်တာက Harm ဖြစ်ဖို့ များပါတယ်၊ Hum ဆိုရင်၊ အဓိပ္ပါယ် လုံးလုံးကြီး ပြောင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ Sacrifice ဆိုတာလည်း မှားလေ့ မှားထရှိတဲ့၊ စကားလုံး
မျိုးပါ။ Spelling check ရှိရင် သိပ်ကောင်းပါတယ်။ အမှားနည်းတာပေါ့။ ချွင်းချက်ကတော့ Harm ကို Hum လို့ ရိုက်ရင်၊ စာလုံးပေါင်းမမှားလို့အမှားပြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
Please accept my humble apology for spelling errors it may cause inconvenience to the readers. I would be very grateful to the blog provider if there isaspell -check facility.
And also thank you for being kind to me with this feedback of spelling errors in my comment that was made on 15/2/12. Many thanks indeed.
Accountant General said... :
One thing for sure is even though everyone use as Myanmar (as country and nationality),The name of Burma and Burmese were well written in the history and no way to erase them.
Honestly speaking, it's doesn't matter Burma or Myanmar to me and most important one is communicate well and understand well each other to get the job done well.